Tababare Solskjær oo ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan in Ferguson uu soo fara galiyo shaqadiisa – Gool FM
Tababare Solskjær oo ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan in Ferguson uu soo fara galiyo shaqadiisa
(Manchester) 22 Jan 2019. Macalinka ku meel gaarka ah kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay wararka ku aadan in tababaraha halyayga ah ee Sir Alex Ferguson uu ku lug leeyahay go’aamadiisa tan iyo markii uu qabtay shaqada tababarka ee Red Devils.
Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” ee dalka England wuxuu kaga hadlay arintan wuxuuna yiri:
“Sheekada ku aadan in Sir Alex Ferguson uu faragelin ku sameynayo shaqadeyda? Ma sheekeysano isbuuc kasta, xaqiiqda ayaana ah in aan wada hadlin isaga inbadan”.
“Wuxuu mar nagu soo booqday tababarka kooxda, marna wuxuu u yimid inuu la kulmo Giuseppe Rossi”.
“Waxaan u maleynayaa inuu saameyn igu yeeshay muddo dhan 15 sano ah, ciyaaryahan ahaan hogaamintiisa”.
Si kastba Manchester United ayaa guul gaartay 7 kulan tan iyo markii uu shaqada si ku meel gaar ah ula wareegay tababare Ole Gunnar Solskjær ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan, kadib markii shaqo ka ceyrin lagu sameeyay Jose Mourinho.
Barcelona oo si rasmi ah saxaafada ugu soo bandhigtay laacibkeeda cusub ee Kevin-Prince Boateng + SAWIRO